I-Arhente ye-SEO ye-Semalt: Ukugxila ekubonakaleni kwaye hayi iiLinki zeBlue kuphela
Xa kuziwa kwi-SEO, eyona njongo yazo zonke iiwebhusayithi kukufikelela phezulu. Buyela emva ngeentsuku zakudala, oko kwakuthetha ukungena kwiilinki "eziluhlaza eziluhlaza". Ngelixa "top of Google" injongo ayitshintshanga kakhulu ebantwini, indlela oyifikelela ngayo itshintshe kakhulu.
Ngaphambi kokuba singene nzulu kakhulu, kubalulekile ukuqonda ingxoxo-mpikiswano esele iqhubeke kangangexesha elithile kwi-SEO. Ngaba amakhonkco alishumi aluhlaza afile? Ngeempawu ezintsha ze-SEO eziphuma rhoqo ngonyaka, impendulo yalo mbuzo inokuxhomekeka kwinjongo yakho. Siza kungena kwiinkcukacha ezinkulu apha ngezantsi.
Yintoni iiLinks eBlue?
Xa usiva ingcaphephe yentengiso ithetha malunga nekhonkco ezilishumi eluhlaza, bayathetha ngeziphumo ezilishumi ezilishumi kuGoogle. Kuxhomekeka kuphando, iphepha lokuqala likaGoogle lithatha ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-75 ukuya kwengama-95 pesenti yezithuthi. Ukufikelela kula makhonkco alishumi aluhlaza kubaluleke kakhulu kwimpumelelo kuGoogle. Kungcono ukwahlulahlula isahlulo sesithathu sombala wepayi kunye nabantu abalishumi kunokuba usike isinye kwisine.
Amakhonkco aluhlaza, xa athetha ngabo, yenye indlela yokuthetha iziphumo zokukhangela. Xa ujonga iphepha leziphumo zokukhangela (i-SERP), amakhonkco aluhlaza awazibandakanyi ziphumo ezihlawulelweyo, amacandelo olwazi, kunye neziqwengana ozibonayo ngasentla okanye kufutshane.
Ngaba iiLinki zeBlue azikufanele ukuKhangela kwi-SEO yanamhlanje?
Ngenxa yokuba iziphumo ezilishumi zokuqala kuGoogle zisafumana isithuthi esikhulu, kusekho ukusetyenziswa okukhulu ekuzilandeleni. Ezi zibhengezo zifakwe kuqala ekuqaleni zithathe indawo enkulu yokuthengiswa kwezindlu kwiphepha langaphambili. Eyona ndlela ilungileyo yokuphatha ezi ayisikuphepha zona, kodwa ukuzisebenzisa njengoko ucwangcisiwe.
Ndingena njani kwiNdawo yeFoto?
Abo bakulawula ukungena kwindawo ye-snippet efakiweyo baya kuliphinda izinga labo lokucofa. Injongo yakho kukungena kuloo ndawo. Ngokufana nayiphi na iprojekthi ye-SEO, umbuzo unokufumana ubunzima. Nangona kunjalo, kukho ezinye zeendlela ezilungileyo ze-SEO zokugcina engqondweni eziza kukunceda.
Nika ingqalelo kwiFomathi
Abakhwetha bakaGoogle, okanye i-AI ephonononga iwebhusayithi ukuze yenziwe yenziwe, ilungile xa isiza kufomathi. Ngokujonga kwakhona ifomathi yoko kungena kula macandelo, uya kuba nembono elungileyo yokuba ungaqala njani. Makhe sithathe umzekelo: indlela yokubhaka ikhekhe.
Siza kuhamba kwiintlobo ngeentlobo zeesithonga kamva, kodwa lo mzekelo usinika iindlela zokupheka kunye neqela le-Q & A. Ukucofa nayiphi na kwezi kuya kubonisa uluhlu. Uluhlu lwabo olunamanani alunabazali ukuba basebenzise ithuba lokufunda ngefomathi kaGoogle. Isakhiwo sabo sesivakalisi sichanekile kwaye kulula ukuyifunda. Ukuskrolela ezantsi kuyakuveza imizekelo emininzi. Oku kubandakanya iividiyo, uluhlu olunezimpazamo, kunye neziqendu ezinde.
Uya kuqaphela ukuba ezinye zezi webhusayithi ziqinile ekusebenziseni iithegi zazo. Ngokusebenzisa i-tag yakho ye-H1, H2, kunye ne-H3 njengenyathelo lokuhlelwa kwendalo, ulandela eyona ndlela ilungileyo ye-SEO. U-Google kunokwenzeka ukuba akhethe umhlathana wamagama angama-50 phantsi kwentloko ye-H3 eyenza lula impendulo.
Nika ingqwalaselo umxholo
Amagqabantshintshi abonisiweyo okuphendula imibuzo. Le mibuzo yimicimbi eqhelekileyo echongwe nguGoogle ngaphakathi kwe-niche. Le yimibuzo onokuthi uyiphendule.
Ukuba usebenzisa ibhlosi kwisixeko esikhulu, eyona ndlela abantu banokufumana ngayo kukubetha i-SEO. Ngokutsala abantu kwiwebhusayithi yakho, ufuna ukubonelela ngothotho lwamanqaku ngendlela yokwenza imvana ngokufanelekileyo. Emva kokukhangela iiforamu ekuphatheni inyama, iresiphi ekwi-intanethi, kunye nakwiziphumo ngokubanzi zikaGoogle, ufumana uthotho lwemibuzo onokuyiphendula.
Kungcono ukuqonda ukuba umthengi ubuza imibuzo njani. Esi sicwangciso siza kuzisa abantu kuwe. Ukufumana "ezona ndlela zokungena edolophini" sisicwangciso esasiza kusebenza kwiminyaka engamashumi amane eyadlulayo. Ukufumana abathengi namhlanje, kuya kufuneka sizimisele njengengcali ethembekileyo kumxholo. Ibhlog yindlela elula yokwenza oku.
Beka Izinto zakho eziLungile
Ukuba ujonga amaphephandaba kunye neentengiso kule minyaka ili-100 idlulileyo, uya kuqaphela umxholo oqhelekileyo. Abantu abaye bafumana uqeqesho kwezi ndawo baya kukwazisa ngento ebizwa ngokuba yiphiramidi ebuyayo. Olu hlobo lwe-piramidi luvunyiweyo yinto esetyenziswayo ngababhali beendaba xa bebeka umxholo wabo ophezulu entlokweni. Xa sisebenzisa le Logic kwii-H2 zethu nakwiihloko ze-H3, uGoogle uyakuqaphela oku.
Usenokuba ucinga ukuba umsebenzi wakho njengomnini-shishini kukugcina becinga ngemveliso yakho ixesha elide. Kodwa ubude bomntu oqwalaselweyo yimizuzwana esibhozo. Ukuba isihloko sakho asibahendi, sele uphulukene nabo.
Ukuba ufaka le nto kwiibhloko zakho, awuyi kubona uthotho lweeblogi ezilayisha ngaphambili zonke iinkcukacha eziluncedo. Uya kubona ukuba isihloko ngasinye sisebenza njengombuzo, esilandela ngokukhawuleza impendulo. Indlela yabo isenokuba kukutshiza kulwazi oluluncedo ukukhokelela kwimpendulo. Nokuba kwenzeka ntoni, ukuba ugcina abantu belinde ixesha elide, baya konwaba ukufumana isisombululo esikhawulezileyo kwenye indawo.
Ungandinceda njani uSemalt ngale nto?
Iqela leengcali zikaSemalt ziyazi ezi zinto. Ngoqeqesho malunga neendlela eziphambili ze-SEO, uSemalt uya kuxhaphaza la mathuba ngokujolisa kumagama aphambili. Ngokubeka la magama aphambili kwezo ncoko zibalulekileyo, udwelisa phakathi kwezona ziphambili kukhangelo oluthile.
Kukho amagama aphambili athi amashishini atyekele ekungahoyeni. Ngokudibanisa la magama aphambili kunye namaqhosha afakiweyo, unokuzifumana ukwimeko ebalaseleyo yokufumana uluhlu lwamagama aphambili okhuphiswano. Thetha nochwephesha we-SEO namhlanje ukuze ukhulise isicwangciso sokusebenza ukuze uye kwinqanaba eliphezulu likaGoogle.
Ngaba zeziphi iintlobo ezahlukileyo zeeNcwadana zeeMpawu?
Xa ufezekisa umxholo weencwadana eziqhotyoshelweyo, kubalulekile ukuba wazi ukuba zimbini iindlela ezikhetheyo zosasazo: uhlobo kunye nevidiyo. Isininzi sendlela esiza kuhamba kuyo kweli candelo lisekwe kumagama, kodwa ividiyo yitshaneli onokuthi uqwalasele ukongeza kwithagethi yakho. Ividiyo yinkonzo ebonelelwa nguSemalt. Siza kudlula kwiindawo ezine.
Izintlu eziNgcwele okanye eziNgcono
Imithombo yeendaba ekhulayo
Ayikhokeleli kwiwebhusayithi yakho
Ifuna amava okuhlela
Utyalomali oluphezulu nangaphambili
UGoogle, ongumnini weYouTube, uthanda ukuxhasa igama labo. Ngenxa yoko, i-snippets ze-YouTube yindlela efanelekileyo yokujolisa abantu. Ezi ziqwengana azikhokeleli abantu kwindawo yakho, kodwa zibakhokelela “emngcwabeni” onokubuyela kwindawo yakho. Esi sicwangciso asinakuba yingxaki, kodwa uqhele ukuphulukana nabantu ngakumbi ngokuya usiya ezantsi kubasebenzi.
Ukuhlelwa kwevidiyo kukwinkqubo entsonkothileyo enenqanaba eliphezulu lotyalo-mali lwangaphambili. Uya kudinga ukuseka indawo yobungcali kwishishini lakho okanye kwikhaya lakho. Kuya kufuneka ubonise ubungqina bendawo. Kuya kufuneka umhleli aqinisekise ukuba uvelisa umgangatho ophezulu. Lithuba elihle eli, kodwa elisekho kakhulu kubantu abanobuchule.
Isiqwenga esikhulu solwazi
Ingabonakala ngcono kuGoogle kunakwiphepha lakho
Iizifafazo zeetafile zinomtsalane, izinto eziqhutywa yidatha ezahlukileyo. Olu “wumbi” luvela kwinto yokuba uninzi lwewebhusayithi azinakukwazi ukuzibandakanya kakuhle. Uninzi lucinga ukuba kuya kufuneka ubeke itafile kwindawo yakho ukuze usebenzise ezi zinto. Kodwa nayiphi na idatha efakwe kwiikholamu kunye nemigca inokulingana necala.
Izizathu ezininzi zokuba ungaziboni iitafile kukusilela kwabo kwiimvakalelo. Abanye abantu abathandi ukubona iseti yedatha. Kwakhona, i-HTML yokudala ezi ifuna kancinci uphando. Abo bangenalwazi kumxholo banokungafuni ukwenza le ndlela.
Inika olona lwazi
Ingabandakanya ukubizelwa kwisenzo (CTA)
Kumnandi kakhulu ukufunda
I-Picky ngobude bokubhaliweyo
Iziqwengana zomhlathi zezi ziqulathe ibhloko eqinileyo yombhalo. Bajonge ukuba phantsi nje kwe-H3 njengempendulo yombuzo oboniswe kwisihloko. Inika olona lwazi kwaye inikezela elona thuba lokubandakanya i-CTA.
Ezi zezona zincomekayo kubafundi ukuba badlule kuzo. Ukunikezelwa kwesithuba sokunikela ingqalelo kwisibhozo esichazwe ngaphambili, unokuphulukana nabo ngomhlathi. Kwakhona, iGoogle ibonakala inemicimbi efanayo. Banokuthatha isigqibo sokususa isicatshulwa ukuba utshintsho kwi-algorithm yabo lubala lide kakhulu.
Ingaba nefuthe kakhulu
Ukuqonda ngokulula inyathelo ngenyathelo
Uluhlu olunamachaphaza amabiweyo kunye nolunamanani lolwesibini ukhetho oluqhelekileyo onalo. Bafika ngqo kwinqanaba, banike uluhlu lwezinto ezinokukhetha ukuphendula imibuzo ebhalwe isihloko. Yeyona fomati ibalaseleyo yokubonelela ngemiyalelo yamanyathelo ngamanyathelo. Le ndlela yokufunda yeyona nto inomdla kakhulu ekuboneleleni ngesisombululo esikhawulezileyo.
Izinto eziza kubakho ngokukhetha uluhlu okanye uluhlu lweebhutsi zinxulumene nendawo. Ngelixa iibhulethini okanye amanani anexabiso elithile, ukubona olu luhlu luya kuqala ukuba yinto eqhelekileyo. Kwakhona, iibhulethini okanye amanani awanalo igumbi elincinci ekusombululeni iingxaki ezinzima.
Amakhonkco alishumi aluhlaza esaziyo ukuba asezantsi kunoluhlu, iimephu, iividiyo, kunye neeseshoni ze-Q&A phezulu kwenjini yokukhangela. Ngelixa inqanaba leshumi liphezulu lisafuneka kwimpumelelo, ukubetha kwezi ziqwengana kudlalwa njengeyona nto iphambili ekwandiseni ukubonakala. Ukuba umntu uzama ukuthatha inombolo yakho enye slot kunye nevidiyo okanye umhlathi, umsebenzi wakho ujonge ezi snippets.
Ngolwazi lwezinto ezidweliswe apha ngasentla, uya kuba nako ukujolisa kumijelo emibini yemithombo yeendaba eziphambili ukuphucula ubuchule bakho bokungena kwezi ziqwenga. Ukudityaniswa neqela likaSemalt leengcali ze-SEO, injongo yakho yokufikelela phezulu kuGoogle inokufikeleleka. Ngolwazi oluthe kratya, nceda ufikelele kwiingcali namhlanje.